Climatology: ihe ọ bụ, etu esi mụọ ya na uru ọ bara | Netwọk Mgbasa Ozi
O doro anya na ị ghatụla banyere ihu igwe climatology. Ihu igwe bu ihe metutara onye obula nihi na obu ihe na ekpebi uzo ndi mmadu si ebi ndu. Omenala, omenaala, ụzọ ndụ, ahịhịa, ahịhịa, ahịhịa, ọrụ ugbo, wdg. Ọnọdụ ihu igwe nke otu mpaghara nwere ọnọdụ niile. Iji na-amụ mgbanwe ndị na-emetụta ihu igwe nke otu mpaghara anyị nwere sayensị akpọrọ climatology. O bu ihe gbasara sayensi ka ona amu igwe na ngbanwe ya n’oge niile.
N’isiokwu a anyị ga-ekwu maka ihe ọ bụla gbasara ihu igwe.
1 Kedu ihe bụ climatology
3 Otu esi amu igwe
4 Ihe ihu igwe
Kedu ihe bụ climatology
Ọ bụ sayensị lekwasịrị anya n'ịmara mmetụta, ịrụ ọrụ na nsonaazụ nke ịdị adị nke ihu igwe na mpaghara ụfọdụ. Dịka ọmụmaatụ, iji mata otu ụdị mgbanwe ihu igwe na ihu igwe dị iche iche si emetụta Spain, ọ dị mkpa ịmụ data sitere na ndekọ dị ogologo karị. Ntọala na mgbanwe nke climatology bụ otu dị ka ihu igwe, mana amụrụ ya ogologo oge.
Na ngwucha ubochi, ihu igwe di otu ihe kari nchikota nke ihu igwe dum na oge. Ntọala nke ihu igwe nke na-egosi ọnọdụ ndị a na-ahụkarị bụ ndị mejupụtara ihu igwe na ọmụmụ ogologo oge. Maka nghọta ka mma: ka anyị kwuo na edere mmiri ozuzo na ụkpụrụ okpomọkụ nke mpaghara na-aga n'ihu ruo ọtụtụ afọ na afọ. O doro anya na ọ naghị adịkarị otu mmiri ozuzo ma ọ bụ na-eme otu okpomọkụ. Agbanyeghị, ọ bụ eziokwu na ụkpụrụ ndị a dị na nke ha nke na-ekpebi njirimara nke ihu igwe anyị nọ na ya.
Otu ihe atụ dị mfe bụ ihu igwe nke Spain. Anyị na-enwe obi ọkụ dị jụụ n'oge oyi na nnukwu okpomọkụ n'oge ọkọchị. Nkezi mmiri ozuzo kwa afọ nke 650 mm. Ọ pụtara na ọ na-ezo otu mmiri mgbe niile? Thekpụrụ ndị ahụ na-ezo na oke mmiri ozuzo nke afọ ọ bụla. Ọtụtụ afọ mmiri ozuzo ga-adị n’elu karịa afọ nwere ụkọ mmiri ozuzo ga-adị n’okpuru.
Nke a na-agbanwe ụwa niile na ihe a na-akpọ mgbanwe ihu igwe. Ihe ndị a na-ebute mmetụta na ikuku n'ihi mmụba nke griin haus nke na-akpata mgbanwe na mgbanwe ndị mejupụtara ihu igwe n'ụwa niile.
Mgbe ị nọ n'obodo, mpaghara, ugwu, wdg. Anyị na-ahụ ihu igwe dị iche na ihu igwe nke mpaghara ahụ dum, amaara ya dị ka topoclimate. Dị ka ọ na-adịkarị, a na-ahụ ya site na inwe mmetụta dị ukwuu na mpaghara mpaghara karịa ihe ndị ọzọ metụtara ala. A maara ya dị ka microclimate nke na-enweghị nkewa dị ala na nke anyị nwere ike ịhụ n’ime ụlọ, n’okpuru osisi ma ọ bụ n’akuku okporo ámá. Nkọwa ndị a na-ekpebi njirimara nke ije bioclimatic.
Ihu igwe nwere ike ịdị na-adịkarị ogologo oge ma na-ekpebi mmalite nke usoro ala nke mpaghara. Nke a na-enye ohere na ụdị ahịhịa na ụdị ala ụfọdụ na-eto dabere na njirimara ihu igwe. Na oge jioloji, ihu igwe na-agbanwekwa n'ụzọ okike. Oge na-agbanwe agbanwe na otu ihu igwe nwere ike ịgbanwe n'ime mpaghara. Dịka ọmụmaatụ, n'oge akpụrụ Age, ihu igwe nke otu mpaghara dị iche na ya dum.
Ọ dị mkpa iji hụ mgbanwe nke ọnọdụ okpomọkụ, nrụgide nke ikuku, ifufe, iru mmiri na ọdịda. A maara mgbanwe ndị a dị ka ihe gbasara ihu igwe. A na-anakọta data ndị a na ọdụ ụgbọ elu. Anyị nwere ike ịnakọta data ndị a ma kwadebe tebụl nke ụkpụrụ dị oke ọnụ nke ebufere na iche ugwu ugwu nke ahụ na-egosi anyị ọdịiche nke mgbanwe ndị a niile n’oge.
Otu esi amu igwe
Iji mụọ ihu igwe, anyị ga-atụle ọtụtụ ụzọ ga - enyere gị aka ịmata mgbanwe ihu igwe na ịkọ njirimara:
Nyocha gbasara ihu igwe. Ọ bụ sayensị dabere na nyocha ọnụ ọgụgụ nke njirimara ndị a na-ewere dị oke mkpa maka ọmụmụ nke ihu igwe. Dịka ọmụmaatụ, ebumnuche pụtara ihe niile gbasara ikuku na-eguzobe ma nwee ike ịmalite iru oke oke n'ọnọdụ ụfọdụ.
Mgbanwe ugwu. Ọ bụ akụkụ ahụ na-enye echiche na-agbanwe agbanwe nke ọma banyere setịpụrụ ngosipụta na-agbanwe agbanwe nke anyị nwere ike ịchọta na ikuku. Dịka ọmụmaatụ, site na usoro ọrụ mmiri na thermodynamics, anyị nwere ike ịkọwapụta ngosipụta nke anyị na-ahụ maka mgbanwe mgbanwe ihu igwe.
Synoptic Climatology. Ọ bụ nyocha nke nhazi nke ihe niile dị na mbara igwe. Ihe ọ n’achọ inweta bụ ịmatakwu ikuku.
Anyị ga-edepụta ihe ndị na-enyere aka ịchọpụta njirimara ihu igwe nke otu mpaghara. Ihe ihu igwe kwekọrọ na njirimara ala. Ka anyị nyochaa ha n'otu n'otu:
Ike anyanwụ: Ọ bụ ọkwa nke radieshon nke anyanwụ na-emetụta elu.
Latitude: Ọ bụ ebe mpaghara dị site na mbara ala Ecuador, gaa n'ihu ugwu ma ọ bụ ndịda.
Elu na enyemaka: ogo dị elu karịa oke osimiri nke mpaghara a na-amụ amụ na mkpọda nke enyemaka ọ nwere. Ugwu ugwu abụghị otu ihe ahụ prairie ma ọ bụ oke ọhịa.
Njide ụwa: Ọ bụ ọnọdụ nke ala kọntinent na-enweghị ụsọ mmiri.
Fọdụ ihe dịka ikesa ala, ala dị larịị, ụba ahịhịa ndụ, ugwu na ọzara na-emetụta ihe ndị a.
Ihe ị maara n'ezie bụ na ikuku ikuku dị mkpa dị ka mmeghachi omume igwe. Enwere ike ịsị na ọ bụ isi na ntọala nke njirimara ihu igwe niile nke mpaghara. Mgbanwe kachasị dị mkpa site na nke ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-etolite dị ka ịdị adị nke ụfọdụ flora na fauna, odida obodo, enyemaka, wdg. Ọnọdụ okpomọkụ a na-egosipụtakwa ọchịchị ọdịda, ikuku ikuku na igwe ojii.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere climatology na otu esi agụ ya na sayensị. E wezụga na ịba uru ọ nwere ike ịnwe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Climatology » Climatology